ARTICLES | Ministry of Hotels and Tourism, Myanmar
Reminiscence of Kanaung
Apr 11, 2018 | Tourism Students' Articles
Thant Thaw Kaung, Kyaw Ye Aung, Su Pyae Sandi Myanmar has been ruled by several kings with greatest achievements. But the kings are not the only ones who did the greatest in the history. There wasaprince who was so brave and wise that he lifted the injured country...
Exploring Hidden Ethnic In Myanmar
Aye Myat May We are doing article assignment for Consumer Behavior Subject by Prof.Ausrine Armaite. We want to discuss about some sensitive things that we want to disclose one of the undiscovered ethnics in Myanmar, the Salone. There are four major ethnic groups in...
ESSENTIALLY NEED TO PROMOTE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TOURISM IN CHIN STATE
Apr 9, 2018 | Tourism Students' Articles
Khine Nwe Tun, Shwe Pyo Oo, Nang Emerald Han Tun Chin Sate is the second poorest and least developed state in Myanmar but rich in the beauty of its mountain landscape and the vibrant cultures of its indigenous people. The problem is the local people don’t preserve...
“ခရီးသွားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစိုးရ၊ပုဂ္ဂလိက၊ပြည်သူလက်တွဲပေး”
Feb 9, 2018 | Articles
ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အပံ့ပြုသကဲ့သို့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ ရရှိသောဝင်ငွေများသည် အလွှာပေါင်းစုံသို့ စီးဝင်သက်ရောက်စေပြီး အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းများစွာကို ဖန်တီးပေး သော လုပ်ငန်းဖြစ် ကာ...
ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခင်ခေတ်အဆက်ဆက်၌ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ (Tourism)ဟု ဆိုလိုက်သည်နှင့် နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်ကြီးများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်ဟု ရှေးရိုး စွဲယူဆခဲ့ကြပါသည်။ (၂၀၁၆)ခုနှစ် ပြည်သူ့အစိုးရတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် သုံးရက်၊ ငါးရက်...
“Sustainable Tourism: A Tool for development” (Consolation Prize)
Oct 10, 2017 | Articles
Tourists from different countries visit various unique destinations all over the world every year for cultural, spiritual or nature-related reasons. Tourism is also one of the doors thatacountry can generate foreign incomes and local investments. In 21st century,...
ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းနေ့နှင့် မြန်မာ (ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းနေ့ အကောင်းဆုံးဆုရဆောင်းပါး)
ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံတိုင်းအပေါ် စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု များစွာဖြစ်စေပြီး အထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရ ရှိစေ သည့် အပြင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း၊ ဆင်းရဲနွမ်း...
ဝင်းသိန်း (ဟိုတယ်/ခရီး) ကမ္ဘာကြီးသည် လူသားတို့မှီခိုအားထားနေထိုင်ရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပေသည်။ လူသား များသည် မိမိတို့အစုအဖွဲ့အလိုက် စုစည်းနေထိုင်ခဲ့ သည်မှာ ကာလမြောက်များစွာရှိနေခဲ့ပေပြီ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသားတို့နေထိုင်နေကြသည့်အလျှောက် ၎င်းတို့၏လိုအင်ဆန္ဒများကို ကမ္ဘာ ပေါ်ရှိ...
Peace and Progress of Tourism in Kayin State
Mg Mg Hlaing (Hotels and Tourism) Kayin State is located in the southeastern Myanmar, primarily Kayin people and multiplicity of ethnic groups inhabited in the State. Because of its prosperity in natural beauty, hospitality of people and indigenous culture, it becomes...
“By means of love”
Myint Htwe (Hotels and Tourism) From someone’s birth to death, love is dwell powerfully. Everything is beautiful and calm by our love, everything is ugly and blatant without love. As well as love is defined in various ways, there are many different kinds of love. Love...
Queen of Cherry Flower and Beauty of Nay Pyi Taw
When we say Cherry, it will remind us of Win Oo,a composer,asinger, an actor who has got Academy award in the “Mg TohCherryMyay”, one of the films directed by U Tin Yu(1920-2013) as well as stunning PyinOoLwin and Cherry became more famous because of beauty of...
Rest at Golden Tree
“ Mingalabar! Our China Southern Air Lines CZ 8472 Airbus 320 flight will land at Haikou City, International Airline, Hainan Island. Please make sure your seatbelts and straight forward your seats. The weather of Haikou is 29 C , 84 F ”. Sweet declaration of flight...
ကုသိုလ်တရားပွားများချင်သူများလာရောက်သောနေရာ၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များလေ့လာအပန်းဖြေနိုင်ေ သာနေရာ၊ ရေလုပ်ငန်းများနှင့် အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းပြုနေသောနေရာ၊ အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်ဘက်တခွင် ရှုမဆုံးသောပင်လယ်ရှုခင်းများကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်သောနေရာ၊ နံနက်ခင်း ပင်လယ်...
Jul 14, 2017 | Articles
မြင့်ထွေး (ဟိုတယ်/ခရီး) ကျွန်တော့်ဝန်ထမ်းသက်တမ်းတစ်လျှောက်သွားခဲ့သော ခရီးစဉ်များစွာရှိခဲ့သည်။ သွားခဲ့သော ခရီးစဉ်များမှ အတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတများစွာ ရရှိ ခဲ့ပြီး၊ လျှောက်လှမ်းရာဘ၀ခရီးအတွက် သင်ယူ စရာ ၊ အတုယူစရာ၊ မှတ်သားစရာ၊ သင်ခန်းစာယူစရာ၊ ပြန်လည်အသုံးပြုစရာ၊ တဆင့်ပြန် လည်...
“အာဆီယံသန့်ရှင်းသော ခရီးသွားမြို့တော်နှင့် အနာဂါတ်မြန်မာ”
ဝင်းသိန်း (ဟိုတယ်/ခရီး) အာဆီယံဒေသတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းအရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန်နှင့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းအား တစ်ခုတည်းသောခရီးသွားဒေသအဖြစ်ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မဟာ ဗျူဟာ ၂၀၁၁-၂၀၁၅ (ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015) ကို စတင်ရေးဆွဲ...
ဝင်းသိန်း(ဟိုတယ်/ခရီး) မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ရန် မီးရထား နှင့်ခရီးသွားခြင်းလုပ်ငန်းကို ဖန်တီးဖော်ဆောင်နိုင်ပေသည်။ မြန်မာ့မီးရထား သည် နိုင်ငံတကာ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မည်ဆိုပါက အဆင့်မမြင့်သေးနိုင်သော်လည်း...
As time goes by, new things will become old and everything cannot be permanent according to the nature law. To show the business that supports the national economy in visualizing and coordinating of arts and deep social skills, I will point out tourism. Today, tourism...
ချင်းပြည်နယ်၏ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်သည့် “ခေါ်နူးစုမ်” နှင့် နုပျိုလန်းဆန်းသည့် “ဆော်လောင်း” အလှပိုင်ရှင်များသို့
"ချင်းပြည်နယ်၏ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်သည့် “ခေါ်နူးစုမ်” နှင့် နုပျိုလန်းဆန်းသည့် “ဆော်လောင်း” အလှပိုင်ရှင်များသို့" မြင့်ထွေး(ဟိုတယ်/ခရီး) ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတို့အနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော လူနေမှုနှင့် လိုက်ဖက်ညီစွာနေထိုင်နိုင် ရေးအတွက် စက္ကန့်နှင့်အမျှအချိန်ကို...
“ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးဖို့ သဘာဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစို့” Santino (Tourism) ယနေ့ကမ္ဘာကြီးတွင် စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်း၊ စက်တပ်ယာဉ်များ အသုံး ပြုမှုများပြားလာခြင်း၊ သစ်တောများပြုန်းတီး လာခြင်း၊ မြေပေါ်မြေအောက်သယံဇာတများကို အလွန်...